Bruxism उपचार: दाँत पीस कसरी रोक्न - स्वास्थ्य शिक्षा | अगस्ट 2021
स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण प्रेस कम्पनी, चेकआउट स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर कम्पनी, औषधि जानकारी स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी औषधि जानकारी स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार कल्याण समाचार, कल्याण चेकआउट औषधि बनाम मित्र समुदाय, कम्पनी समुदाय
मुख्य >> स्वास्थ्य शिक्षा >> म किन मेरो दाँत पीस गर्दैछु?
म किन मेरो दाँत पीस गर्दैछु?
के तपाईं अनुहारको दुखो चोट वा तपाईंको बaw्गारामा दुखाइको साथ उठ्नुहुन्छ? के तपाइँ बिहान प्राय: टाउको दुखाइ हुनुहुन्छ? तपाईं सुत्दा दाँत पिँध्न सक्नुहुन्छ। मेडिकल रूपमा ब्रुक्सिज्मको रूपमा चिनिन्छ, यो दोहोरिएको, बेहोश क्लेञ्चीing्ग र ग्राइन्डिंग आन्दोलन हो। यो अनैच्छिक हो, र तपाइँ प्राय: सचेत हुनुहुन्न कि तपाइँ यो गरिरहनु भएको छ, विशेष गरी यदि तपाइँ सुताउँदा दाँत थािलिरहनु भएको छ। दाँत पिसाउने प्रक्रिया रोक्नको लागि रणनीतिहरू बिना सजिलै छोड्न गाह्रो छ।
रिवाउन्ड भीडबाट कसरी छुटकारा पाउने
ब्रक्सिज्म भनेको के हो?
ब्रक्सिज्म दांत पीसको लागि मेडिकल नाम हो। दाँत पिसाउँदा यो एक साथ दोहोरिएको रगि is हो, वा दाँत कुँद्ने, दाँतको काट्ने सतहहरूको। तपाईले दाँतहरुमा २ 250० पाउण्ड सम्म दबाब दिन सक्नुहुन्छ MSD म्यानुअल । त्यो धेरै बल हो।
दाँत पसिनाको कारण के हुन्छ?
दाँत पीस गर्नु सामान्य छ। एक तिहाई वयस्कले दिनको घण्टामा ब्रक्सिज्म व्यवहारहरू प्रदर्शन गर्छन्; अनुसार १० मा १ भन्दा बढीको निद्रा ब्रक्सिज्म (वा रातो ब्रुक्सिज्म) छ देवदार-सिनाई मेडिकल सेन्टर । जहाँसुकै पनि २०% देखि %०% बच्चाहरूले दाँत पीसिरहेका हुन्छन्, सामान्यतया निदाएको बेलामा familydoctor.org ।
दाँत पीसको कुनै मूल कारण छैन। यद्यपि त्यहाँ योगदान पुर्‍याउने असंख्य कारकहरू छन्:
तनाव: धेरै चिन्ताको समयमा, धेरै मानिसहरूले दाँत पिँध्न सक्छन्। यो बानी बन्न सक्छ र शान्त समयमा पनि जारी रहन सक्छ।
जेनेटिक्स: Bruxism वंशानुगत हुन सक्छ। धेरै भन्दा धेरै आधा मान्छे जसले दाँत पिँध्ने पनी नजिकको परिवारको एक सदस्य पनि छ जसको ब्रक्सिज्म पनि छ।
केहि चिकित्सा अवस्था: ब्रुक्सिज्म एडीएचडी, वा सेरेब्रल पाल्सी जस्ता केहि स्वास्थ्य स्थितिहरू जस्ता hyperactivity अस्वस्थताका साथ निदान बच्चाहरूमा अधिक पाईन्छ। वयस्कहरूमा यो सामान्य हो डिप्रेसन , चिन्ता , एसिड भाटा वा gastroesophageal भाटा रोग (GERD) , र केही खानाहरू विकार।
निद्रा विकारहरू: दाँत पिसि sn्ग खरानी, ​​अवरोधात्मक निद्रा एपनिया, र बारम्बार निन्द्रा ढाँचा परिवर्तनसँग सम्बन्धित छ। उदाहरणका लागि, शिफ्ट काम गर्नेहरू जो दिउँसो र रात निद्राको बीचमा वैकल्पिक हुन्छन् दाँत पिँडाउने सम्भावना बढी हुन्छ।
जीवन शैली कारकहरू: सुर्तिजन्य प्रयोग, मदिरा सेवन, र क्याफिन सेवन सबै bruxism मा जोडिएको छ। जे होस्, यी जोखिम कारकहरूले कसरी अवस्थामा योगदान पुर्‍याउन सक्छन् भनेर निर्धारण गर्न थप अनुसन्धान आवश्यक छ।
भिटामिनको कमी: त्यहाँ केही अनुमानहरू छन् कि केहि भिटामिनको कमीले ब्रक्सिज्ममा योगदान पुर्‍याउन सक्छ। भिटामिन डी कमिहरु र एक गरीब शोषण क्यालसियम दाँत पिसाउनेमा सम्भावित कारकको रूपमा अध्ययन हुँदैछ, भन्छन् क्रिस्टि फ्रेइनबर्ग-ट्रफल्स , DDS, हडसन उपत्यका दंत चिकित्सा देखभाल, पीसी मा एक दंत चिकित्सक। त्यहाँ धेरै अध्ययन भैरहेका छन्, तर अमेरिकी डेंटल एसोसिएसनले अपनाएको कुनै ठोस प्रमाण भने आएको छैन।
ब्रुक्सिज्मको कारण हुने औषधिहरू
Bruxism केही औषधीहरूको सम्भावित साइड इफेक्ट हुन सक्छ,aको अनुसार अध्ययन २०१ 2019 मा प्रकाशित भयो । सम्भावित अपराधीहरूले एन्टिसाइकोटिक्स र सामान्यतया प्रयोग हुने एन्टिडप्रेसप्रेसहरू समावेश गर्दछ:
एफफेक्सोर ( भेन्लाफैक्सिन )
प्रोजाक ( फ्लुओक्सेटीन )
जोलोफ्ट ( sertraline )
दन्त पीसको लागि औसत समय औषधी सुरु गरेपछि तीन देखि चार हप्ता सम्म हुन्छ, यद्यपि केही व्यक्तिहरू केहि खुराक मात्र पछि सुरु गर्छन्। यसले दाँत कम्चिन रोक्नको लागि औषधी रोके पछि करीव तीन देखि चार हप्ता लाग्छ।
ब्रक्सिज्म कसरी निदान गरिन्छ?
ब्रक्सिज्म एकदम सामान्य छ, तर मानिसहरू एसिम्प्टोमेटिक हुन सक्छन र उनीहरूलाई यो व्यवहार रहेको थाहा हुँदैन, भन्छन् मेरी चार्ल्स हाइगलर , डीएमडी, ओरल, अनुहार, प्रसाधन सामग्री र दन्त इम्प्लान्ट सर्जरी को लागी क्यारोलिनास केन्द्रहरु मा एक orofacial दर्द विशेषज्ञ। यो अक्सर सत्य हुन्छ जब रातमा दाँत पिसाउने कार्य हुन्छ। कहिलेकाँही परिवारका सदस्यले शोरका कारण ध्यान ल्याउँदछ - क्लिक गर्दै, र पपिंग - जसले उनीहरूको निद्रामा बाधा पुर्‍याउँछ। अन्य व्यक्तिहरूले [पीस गरेको] साइड इफेक्टहरू देख्न सक्छन्, हेगलर वर्णन गर्दछ। केही सम्भावित प्रतिकूल प्रभावहरू मौखिक स्वास्थ्य पेशेवरहरूले देखेका छन् दाँत दाँत, तनाव-प्रकारको टाउको दुख्ने, गम्भीर अनुहार वा बaw्गारा दुखाइ, र टेम्पोरोमेन्डिबुलर संयुक्त (TMJ) समस्याहरू।
Bruxism को शुरुआती लक्षणहरु मा शामेल छ:
अनुहार वा बaw्गारा दुखाई
टाउको दुख्ने, विशेष गरी बिहान
जबडा मा कठोरता
उचित ध्यान दिएन भने, ब्रक्सिज्म हुन सक्छ दीर्घकालीन क्षति , जस्तै:
दन्त समस्याहरू, जस्तै चिपड, क्र्याक, वा ढीला दाँत, मुकुट, वा इम्प्लान्टहरू
संवेदनशील दाँत दाँत इनेमेलको तल लगाएको कारण
तनाव अनुहार र जबडा मांसपेशीहरु
जबडा लक गर्दै
गाला भित्रबाट क्षति
दाँतको चुहावट सतहमा समतल क्षेत्रहरू
धेरै चोटि दन्त चिकित्सक वा परिवारका सदस्यहरूद्वारा अवलोकनको माध्यमबाट ब्रक्सिज्म निदान गरिन्छ; यद्यपि, निश्चित निदानमा निद्रा क्लिनिकमा रातभर बस्नु समावेश छ - भनिन्छ पोलिस्मोनोग्राफी। यो निद्रा अध्ययन प्रायजसो महँगो र समय खपत हुने हुन्छ, र मानिसहरूले कम आक्रमण गर्ने अवलोकन विधिको लागि विकल्प लिन सक्दछन्, जहाँ अनुमानित निदान गरिन्छ।
कसरी दाँत पिसाउने रोक्न
Cases ०% भन्दा बढी केसहरूमा ब्रक्सिज्म उपचार एकदम सरल र प्रभावकारी छ, भन्छन् डानियल वोल्टर , डीएमडी, एरिजोनामा एक बहाल र सामान्य दन्त चिकित्सक। धेरै जसो केसहरूमा यसले संयुक्त र मांसपेशीको दुखाइ र टाउको दुखाइमा पनि मद्दत गर्दछ।
त्यहाँ असंख्य उपचार विकल्पहरू छन्:
१. विश्राम विधि
केही व्यक्ति रिलक्स टेकनिक्सको अभ्यास गरेर दाँत पिसाउने घटाउन सक्छन्; जे होस्, दिनको समयमा हल्का ब्रुक्सिज्म भएका व्यक्तिहरूका लागि यी अधिक सफल छन्। साना बच्चाहरूमा, ब्रक्सिज्म प्रायः टाढा जान्छ, र उपचारको आवश्यक पर्दैन। यो समाधान नभएसम्म, विश्रामलाई बढावा दिन एउटा सुत्ने कोठाको तालिका बनाउँदा परिवारलाई सहयोग पुर्‍याउन सहयोग पुर्‍याउँछ। यसमा सुत्ने अघि एक वा दुई घण्टाको लागि टेलिभिजन र इलेक्ट्रोनिक्स सीमित गर्नु, शान्त संगीत बजाउनु, न्यानो नुहाउनु, र पढ्न समय खर्च गर्नु समावेश छ।
trazodone एक औषधि परीक्षण मा देखा पर्दछ
२. व्यवहार परिवर्तनहरू
कसरी जिब्रो, दाँत, र ओठलाई ठीकसँग आराम गर्ने वा जिब्रोलाई माथिल्लो तान गर्ने जस्ता प्रविधिहरू सिक्दा ब the्गारामा अप्ठ्यारो हुन सक्छ। साथै, ट्रिगरहरू चिन्न र तनाव घटाउने र अनुहार अभ्यास प्रयोग गर्न सिक्न ब्रक्सिज्मलाई कम गर्न सक्छ।
M. मुख गार्ड
उपकरण वा स्प्लिन्टहरू पनि भनिन्छ, मुख गार्डहरू तपाईंको दाँतलाई रग्लनबाट रोक्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। तिनीहरू नरम सामग्रीबाट बनेका छन् र कि त माथिल्लो दाँत वा तल्लो दाँतमा फिट छन्। अनुसार स्पिलिन्टहरू दाँतहरू सँगै काट्ने दबाब कम गर्नको लागि रातमा लगाइन्छ अमेरिकी दन्त संघ । कस्टम नाइट गार्डहरू ओभर-द-काउन्टर मुख मुख गार्डहरू भन्दा महँगो छन्, तर तिनीहरू एक हो बढी प्रभावकारी उपचार विकल्प। डाँट फ्रेइनबर्ग-ट्रुफस भन्छन कि तपाईले दाँत किन्न वा गाँसिरहनु भएको बेलामा रातमा रक्षक राख्नु राम्रो हुन्छ। पिसाई वरपर जागरूकता तपाईं बानी तोड्न शुरू गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
A. एक अनिवार्य प्रगति उपकरण (MAD)
एक एमएडीले मुख र बaw्गालाई स्थिर गरेर क्लिन्चिंग र ग्राइन्डिंग रोक्न कार्य गर्दछ। यो रातको मुख भित्र राखिन्छ र तल्लो बaw्गारा अगाडी समात्छ, र पुरानो खर्राटे कम गर्न पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
यो प्रक्रियाले मांसपेशी गतिविधि र जब त्यहाँ धेरै गतिविधि छ संकेतलाई मापन गर्न एक इलेक्ट्रोनिक उपकरण प्रयोग गर्दछ, त्यसैले तपाईं यसलाई रोक्नको लागि कदम चाल्न सक्नुहुन्छ, जुन दिनको ब्रक्सिज्मको लागि उपयुक्त छ।
ज्वरो बिना फ्लू संक्रामक हो
नुस्खा जस्तो मांसपेशी आराम , जबडा मांसपेशिहरुमा तनाव कम गर्न सक्नुहुन्छ। यसले क्लिन्चिंग वा ग्राइन्डिंग रोक्न सक्दैन तर ब्रक्सिज्मको प्रभावहरूलाई कम गर्न सक्छ। दुर्भाग्यवस, राहत प्राप्त गर्न आवश्यक खुराक सामान्य कार्यको लागि प्राय: धेरै उच्च हुन्छ, त्यसैले गाह्रो अवस्थामा बाहेक यथार्थका रूपमा प्रयोग गर्न गाह्रो हुन्छ, वोल्टर भन्छन्। ब्रक्सिज्म उनीहरूद्वारा हुन वा उग्र हुन सक्छ कि भनेर निर्धारण गर्न वर्तमान औषधीहरू अवलोकन गर्न पनि आवश्यक छ, र यदि हो भने, फरक औषधिमा परिवर्तनको बारेमा कुरा गर्नुहोस्।
B. बोटक्स ईन्जेक्सन
बोटक्स ईन्जेक्शनले दन्त पीक्ने क्रममा प्रयोग गरिएको ब .्गारा मांसपेशीहरूलाई पक्षाघात गर्दछ। एफडीएले अनुमोदन गरेको छैन Botox दाँत पीसको लागि। किनकि यो अफ-लेबल उपचार हो, तपाईंको बीमाले यसलाई कभर गर्न सक्दैन। यद्यपि एक अध्ययन २०१ in मा सम्पन्न भयो यो रातको bruxism कम गर्न सहयोगी पाए।
D. दन्त प्रक्रियाहरु
काट्ने सतहलाई पुनः आकार दिन वा पुनर्संचनाले कार्य सुधार गर्न सक्दछ यदि पिसाई र क्लेञ्चिंगको कारणले एक असामान्य टोकाइयो। प्रक्रियाहरूमा उच्च दागहरू भर्न वा दाँत दाँत गर्नका लागि इनले वा क्राउन प्रयोग गर्न सक्दछ।
तपाईंको दन्त चिकित्सक वा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग काम गर्नुहोस् तपाईंको लागि उत्तम उपचार फेला पार्न।
Anti एन्टिबायोटिक्स जुन सीडिफको कारण गर्दछ
मेलोक्सिम के हो र यो केको लागि प्रयोग गरिन्छ?
डेपोले कसरी गर्भावस्था रोक्न काम गर्दछ
के तपाई सँगै मोट्रिन र टायलनोल लिन सक्नुहुन्छ?
के पेट पेट औषधि को लागी लिन
के गर्भावस्था को दौरान मतली को लागी सुरक्षित छ
एप्पल साइडर सिरका पिउँदाका फाइदाहरू